A ga -ebido Huawei Mate 20 Lite na Spain na Septemba 10 | Androidsis
Huawei Mate 20 Lite bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke IFA 2018 a, bụ́ ebe e si gosipụta ya n’ihu ọha. Ihe omuma ohuru nke ndi China emeputara, nke n’enye uzo dika uzo 20 nke gha abia n’onwa iri. Ekwentị a abatala tupu ọ daa n'ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya. Maka ụbọchị nke ihe nlere a ga-abata na Spain, na mgbakwunye na ire ere ya, ekwuputala ọkwa.
Anyị agaghị echere ogologo oge ịzụta Huawei Mate 20 Lite a na Spain. Mwepụta nke ekwentị bụ ndokwa maka izu na-abịa.
Bọchị ụlọ ọrụ họpụtara maka malite Huawei Mate 20 Lite na Spain bụ na September 10. Ya mere, na Mọnde na-esote, a pụrụ ịzụta ihe nlereanya a na mba ahụ dum. Enweghi nkọwa zuru oke enyere, mana enwere olile anya na ha ga - abụrịrị ndị na - ere ahịa oge niile.
Ya mere, ọ nwere obere oge fọdụrụ ịzụta ụdị ọhụụ a sitere n'aka ndị nrụpụta China. Na mgbakwunye, ego ọ ga-enweta na mbido ya na mba anyị ka ekpugherela. Ọnụ ikpeazụ nke Huawei Mate 20 Lite a ga-abụ euro 399 na Spain. Ọnụahịa nke yiri ka ọ dị mma na-atụle nke ọ ruru.
N'oge a nwere naanị agba abụọ nke akara ahụ gosipụtara. A ga-ahapụ ya na agba ojii na-acha anụnụ anụnụ na nke oji. Enweghị akụkọ banyere njikọta agba ọzọ, yabụ anyị chere na opekata mpe ugbu a, a gaghị enwe nsụgharị ndị ọzọ nke ekwentị ọhụrụ site na akara ndị China.
Anyị ga-ahụ otu ndị ahịa si enweta na Spain a ohuru ekwentị. Huawei Mate 20 Lite na-eje ozi dị ka nhụchalụ izizi nke ezinụlọ ọhụrụ nke onye nrụpụta. A ga-ebido usoro abụọ dị elu na October. Kedu ihe ị chere maka ụdị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 20 Lite ga-abata na Spain n'izu na-abịa